भारतको नागरिकता विधेयक पारित भएसँगै रोहिगिंयाहरु बंगलादेशबाट नेपाल भित्रिने क्रम अझै बढ्न सक्ने - LiveMandu
के नेपाल रोहिगिंया शरणार्थी धान्न सक्षम छ ?
भर्खरै भारतले नागरीकता शंसोधन बिधेयक पारित गरेर मुसलमान समुदायका लागि आप्रवासन या नागरीकता पाउने कुनै पनि सम्भावना भारतका लागि रोकिदिएको छ । हेर्ने नै हो भने बेलायतले ब्रेकसिस्ट गर्नुका पछाडि पनि मुसलमान समूदाय लगायत अन्य आप्रवासीको बेलायतमा सहज पहुँच रोकेको छ भने ब्यापारका हिसाबले पैसा तिरेर बिद्यार्थी भएर जानेहरुका लागि भने खुकुलो पनि पारेको छ । बेलायतले सस्ता कामदार पाउन र मुसलमान समूदायको उपस्थिती आप्रवासीका रुपमा कम पार्न चाहेको स्पष्ट छ । यूरोपमा नै बेल्जियम र जर्मनको पछिल्ला समयमा आप्रवासीप्रतिको उदार भावले अहिले त्यहाँ सुरक्षा संवेदनशीलतामा ठूलो प्रश्न उठिरहेको छ । पोष्ट कोलोनीयल विश्वमा ईस्लामोफोविया नयाँ स्वरुपको मुद्दा बनिरहेको छ ।
अब कुरा नेपालको गरौं, वास्तवमा नेपालको सीमाना चीन र भारतसंग मात्र जोडिएको भएपनि भुटान, बगंलादेश, म्यानमार पनि नेपालबाट खासै पर छैन । भारतले सिमा खुकुलो पारिदिएको खण्डमा रातारात नेपालमा अन्य देशबाट शरणार्थी छिर्ने ठूलो सम्भावना छ, भुटानी शरणार्थीहरु पनि त भारतकै बाटो गरेर आएका हुन् । नेपाल तिव्वती र भुटानी दुबै शरणार्थीप्रति उदार थियो र अब नयाँ स्वरुपमा रोहिगिँयाहरु नेपाल छिर्न थालेका छन् ।
म आफैं बगंलादेश र म्यानमारको सिमानासम्म पुगेर रोहिगिंया शरणार्थीहरुको क्याम्प र नाफ खोलाको किनार बंगालको खाडिमा ताजा अवस्था हेरेर आएको छु । रोहिगिंयाहरु म्यानमारमा उपेक्षित हुनुको कारण धर्म मात्र नभई उनीहरुको सरकार विरोधी कदमहरु र अपराधी मानसिकता पनि हैन भन्न सकिने अवस्था छैन । अल्पसंख्यक रोहिगिंयाहरुको मुख्य पेशा अहिले बंगलादेशमा लागुऔषध ब्यापार र हतियारको तस्कर पनि भएको स्पष्ट छ । यद्धपी सम्पूर्ण बालबालिका र महिलाहरु यस्मा संलग्न नहोलान तर रोहिंगियाहरुको उपस्थिती कुनै पनि देशका लागि सुरक्षा संवेदनशीलता नभएको हैन ।
के यहाँलाई थाहा छ ? रोहिंगियाहरु केहि पैसो तिरेर बंगलादेशवाट भारतीय भूमि प्रयोग गर्दे नेपाल छिरिरहेका छन् भन्ने, फूलवारी राजमार्ग प्रयोग गर्दे नेपाल आउने रोहिगिंयाहरुको आप्रवासनमा केहि मानव तस्करहरु संलग्न छन् र नेपाली पक्षमा पनि भ्रष्टाचार र नियन्त्रण कम हुँदा नेपाल अर्को ठूलो जमातमा शरण लिनसक्ने शरणार्थीको जोखिममा छ ।
नेपालमा राष्ट्रसंघीय उच्च आयोग जस्ले शरणार्थी बारे हेर्दछ अर्थात यूएनएचसीआरले शरणार्थीको मान्यता प्रदान गर्दछ, यसको फाइदा धेरै रोहिगिंयाहरुले उठाउन थालिसके । बुढानिलकण्ठ राममन्दिर छेउका टहराहरुमा केहि सयको संख्यामा रहेका रोहिगिंयाहरु अब प्रत्येक दिन बढ्न थालिसके । उनीहरुजनहीलगभग ४० हजार टाका बुझाएर मानव तस्करको गिरोहबाट नेपाल छिरिरहेका छन्, दुखद कुरा नेपाली संयन्त्र बेखबर हो या मौन हो केही भन्न सकिन्न ।
केहि रोहिगिंयाहरु काभ्रेमा पनि बस्न थालेका छन्, यूएचसीआरमा उनीहरुले शरणार्थी मान्यताका लागि निवेदन दिन थालिसकेका छन् । नेपालको राजधानी काठमाण्डौमै पनि रोहिगिंका लागि अस्थाई पाल बनाउन मानव तस्करले जग्गा भाँडामा लिइसकेका पनि खबर छ, छानविन जरुरी छ । बंगलादेशको टाउको दुखाई नेपालमा आउने त हैन, बुझ्न र कदम चाल्न जरुरी छ ।
के नेपाल अब अरु शरणार्थी थाम्न सक्षम छ त ? रोहिगिंयाहरुको मुद्दालाई राष्ट्रिय नीति बनाएर अघि बढ्ने या मानविय नाताका आधारमा उदार रहने ? सरकारको नीति स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
सुयोग ढकाल “लाइभमाण्डु”
पछि ति रोहिगिँयाहरु भएको थाहा पाँए